Ngwanrọ 3D kachasị mma maka ndị mepụtara | Akụrụngwa n'efu
Ihe kacha mma 3D bipụtara ngwanrọ maka ndị na-eme ya
La Nkọwa 3D Ọ bụ otu n'ime usoro teknụzụ nke na-enyekwu ohere. Oge agafeela ebe ndị na-ebi akwụkwọ nwere ike ibipụta naanị n'akụkụ abụọ. Ugbu a, ị nwere ike ịmepụta ọnụọgụ ọgụgụ na ihe dị iche iche yana site na olu ekele ndị a 3D obibi mmemme.
Iji nwee ike rụọ ọrụ na ngwanrọ kachasị mma, ị kwesịrị ịma mkpịsị ugodi nke ụdị mmemme a, na mgbakwunye na ịmara ndepụta nke kacha mma na ị nwere ike ịchọta na nke dakọtara na Linux (ma ọ bụ multiplatform), oghere mepere emepe, na n'efu ...
1 Ndepụta nke mmemme 3D kacha mma
1.3 Dị mfe3D
1.7 Mbipụta Octo
1.8 Njedebe Cura
1.9 Nweta 123D
1.10 3D Mgbapu
1.14 Ntọala Netfabb
Ndepụta nke mmemme 3D kacha mma
Ndepụta na ụfọdụ n'ime mmemme 3D kacha mma na i nwere ike ịchọta bụ:
Ọ bụ otu n'ime mmemme kachasị ike na nke eji eme ihe na mpaghara sọftụwia na - akwụghị ụgwọ. Ọ bụ n'efu ma dị maka nyiwe dị iche iche, gụnyere Linux. Ọ bụ sọftụwia dị ike 3D CAD imewe, na ohere nke iji ígwè obibi akwụkwọ bipụta ha.
Ihe omume a maara nke ọma, maka ụdị ndị ọrụ niile, site na ndị ọkachamara ruo ụfọdụ ndị nwere ahụmahụ. Na-ekwe omume nke emebe na 3D ịme ngosi uwe maka ndị na-ebi akwụkwọ. Ọ nwere ụdị akwụ ụgwọ, ọ dịkwa maka desktọọpụ yana na nsụgharị weebụ ya.
Ezubere ya maka ndị ọrụ ọkachamara chọrọ Slicer iji kwadebe faịlụ faịlụ STL. Ọ bụ Dị ike nke ukwuu, ọ bụ ezie na ikikere ya dị oke ọnụ.
Ọ bụ sọftụwia na - akwụghị ụgwọ kpamkpam, yana ụdị dị maka nyiwe dị iche iche, maka Linux. Na-enye gburugburu ebe obibi nke mmepe ọkachamara maka atụmatụ 3D gị, agbanyeghị na ọ dabere na Software Slicer.
Ọ bụ otu n'ime ọrụ ngwanrọ na-emeghe dị ike karị na ọkachamara, na ọtụtụ nhọrọ maka imewe na 3D ịme ngosi uwe. O nweere onwe ya kpamkpam, ọ dị maka nyiwe dị iche iche dịka Linux, ọ na - enye gị ohere ịnwe ọtụtụ ngwaọrụ maka ihe ọ bụla ...
Ọzọ ọzọ maka 3D ịme ngosi uwe na imewe na XNUMXD-ebi akwụkwọ. Dị maka ọtụtụ nyiwe, gụnyere Linux, Ọ bụ free na-abịa na a kit nke ezigbo ọkachamara ngwaọrụ dezie STLs.
Akụrụngwa a bụ otu n'ime sọftụwia 3D kacha mma, Ezubere maka ndị ọkachamara. Agbanyeghị, ị gaghị akwụ ụgwọ ikikere dị oke ọnụ, ebe ọ bụ n'efu. Ọ dị maka nyiwe dị iche iche, dịka Linux. Ọ na - ejikwa ijikwa ihe mbipụta 3D gị, dịka ịmalite, ịkwụsịtụ, ma ọ bụ ịkwụsịtụ mbipụta ...
Ọ bụ sọftụwia maka ndị mbido chọrọ ịmalite n'ụwa nke mbipụta 3D. Ihe bụ ihe ọzọ, na-anabata faịlụ STL maka ụdị 3D a na-ebi akwụkwọ. N'ezie, ọ bụ kpam kpam n'efu ma dị maka nyiwe dị iche iche, dịka macOS, Windows, na Linux. Na mgbakwunye, o nwekwara ụdị Enterprise nwere ọrụ ndị ọzọ, mana maka ego.
Ọ bụ usoro obibi akwụkwọ 3D nke ama ama Odeslọ ọrụ Autodesk, otu ihe ahụ AutoCAD mepụtara. Ọ bụ ezigbo ihe ngwanrọ nwere njirimara yiri nke gara aga, na mgbakwunye na enweghị onwe. N'ezie, ọ bụghị maka Linux, naanị maka macOS na Windows, yana maka gam akporo mobile ngwaọrụ.
Ihe ngwanrọ ọzọ nke enweghị ihe ọ bụla ga-emere ndị ọzọ anyaụfụ, na mgbakwunye na ịnwe onwe ha yana ohere ịmepụta 3D ụdị site na nyiwe dị iche iche, ngwa ntanetị ihe nlereanya site na ngwaọrụ ọ bụla.
Budata 3D Slash
Ọzọ software si onye puru ime ihe nile autodesk. Ọ bụ ezie na ọ bụghị oghe emeghe, ọ na-arụ ọrụ ma na-ewu ewu software. Na mgbakwunye, ọ bụ n'efu yana ị nwere ike iji nyiwe dị iche iche, ọbụlagodi Linux ma ọ bụrụ na ejiri ngwa weebụ ya.
Ọ dị nnọọ ka nke gara aga, na-enwe ike ịme ihe atụ na 3D na nyiwe dị iche iche, ebe ọ bụ na ọ dabere na API API WebGL a na-etinye ya na ndọtị ị nwere ike iwunye na Google Chrome. N'ezie, ọ bụ kpam kpam n'efu.
Ọ bụghị usoro ịme ngosi uwe, mana ọ na - enye gị ohere imeghe ma lelee faịlụ STL. Nke ahụ ga-enye gị ohere ịnweta ihe dị mfe Ihe nlere 3D. Ọ bụkwa web-dabeere, n'ihi ya ị nwere ike bulite gị ụdị ọ bụla na ihe nchọgharị weebụ.
Ọ bụ ezigbo ngwanrọ maka ndị na-achọ mmemme 3D mbipụta akwụkwọ nke emebere maka ndị ọrụ etiti. Ihe niile ịchọrọ iji dozie faịlụ STL ma nwee ike ibipụta ihe ịchọrọ, yana rụkwaa, dezie, ma nyochaa The aghụghọ. N'ezie, ọ bụ n'efu (ọ bụ ezie na ọ kwụrụ ụgwọ nsụgharị) ma ọ dị maka Windows.
Budata Netfabb Basic
Yiri nnọọ ka onye bu ụzọ, ma dabere na Slicer. Ọ bụ n'efu ma dịkwa maka Linux, Windows, na macOS n'okwu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Nkọwa 3D » Ihe kacha mma 3D bipụtara ngwanrọ maka ndị na-eme ya